निर्वाचन सम्भव छैन, संसद पुनस्थापना हुनैपर्छः डा. कोइराला
विराटनगर। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइरालाले संसद पुनस्थापना नभए देश द्वन्द्वमा फस्ने खतरा रहेको बताएका छन्। आइतबार विराटनगर स्थित कोइराला निवासमा सञ्चारकर्मीसँगको भेटमा कोइरालाले अदालतबाट संसद पुनस्थापनाको निर्णय नभए देश द्वन्द्वमा फस्ने खतरा रहेको बताएका हुन्।
अदालतबाट संसद पुनस्थापनाको निर्णय भए अहिले देखिएको समस्या समाधान हुने, नभए देश नयाँ खालको द्वन्दमा फस्ने कोइरालाको भनाई छ। अदालतले जुनसुकै निर्णय गरे पनि कांग्रेस अदालतको निर्णय स्वीकार गर्दै आगामि रणनीति तय गर्ने पक्षमा रहेको उनले बताए। तर, तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुने अवस्था नरहेको उनले स्पष्ट पारे।
विभिन्न कारणले तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुने अवस्था नदेखिएको उनले बताए। ‘संसद विघटनको मुद्धा अदालतमा विचाराधिन रहेको, नेकपाको दल विवाद टुंगो नलागेको र निर्वाचनको मिति नजिकिंदै गएकाले तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुने अवस्था छैन’ कोइरालाले भने। उनले नेपालमा तीन महिनामा निर्वाचन कसैलै पनि गर्न नसक्ने दाबीसमेत गरे।
अपवादका रुपमा निर्वाचन भइहालेको अवस्थामा कांग्रेस निर्वाचनबाट नभाग्ने कोइरालाले स्पष्ट पारे। उनले निर्वाचनको तयारीबारे निर्वाचन आयोगसँग पनि छलफल गरिने बताए। संसद विघटन असंवैधानिक भएकाले प्रधानमन्त्रीको कदमको बिरोधमा कांग्रेस सडकमा आइसकेकाले सरकारको बिरोध र निर्वाचनको तयारी दुबैलाई कांग्रेसले एकैसाथ अघि बढाउने कोइरालाले स्पष्ट पारे।